Nezvedu - Huizhou Winmax Sport Co., Ltd.
Sevatengesi veChina vakakura mumabhodhi uye matafura emitambo, tinozvipira pakupa mhinduro imwe chete yemabhiridha ako ese uye nemitambo yekutamba.
WIN.MAX inomiririra 'Zvese zveMitambo' uye iri kugara ichiedza kuyedza, iine yakakura chigadzirwa mhando inovhara akasiyana siyana emitambo nemitambo.
Sevatengesi veChina vakakura mumabhodhi uye matafura emitambo, tinozvipira pakupa mhinduro imwe chete yemabhiridha ako ese uye nemitambo yekutamba. Isu tinotakura yakapararira renji yematafura, foosball matafura, tafura tenisi matafura, hockey matafura, dartboards, emagetsi dartboards, dart zvishongedzo uye zvimwe muChina. Isu tinopa vana pamwe nevakuru.
Isu hatina chete kuseta indasitiri zviyero zvehunhu asiwo dhizaini yemazuva ano. Isu tiri zvakare tichienderera nekuwedzera yedu chigadzirwa portfolio kusangana nezvinokura zvinodiwa kubva kune vatengi vedu.
WIN.MAX Mitambo inotengesa zvigadzirwa zvayo zvakananga kune vatengi kuburikidza nemashopu ezvitoro, zvitoro zvefekitori, uye e-commerce uye kuburikidza nevatengi vekutengesa mumitambo yezvinhu zvemitambo, vatengesi vepamusoro, vatengesi vazhinji, makirabhu ezvehutano uye vaparidzi. Muna Zvita 2020, WIN.MAX Mitambo yega yekutengesa sangano yakafukidza nyika makumi maviri.
Fekitori Nyika / Nharaunda Pasi 2, Kwete. 6 Kuvaka, No. 49, Zhongkai 2nd Road, Huizhou Guta, Guangdong Province, China
Gore rakasimbiswa 2013
Rudzi rwebhizinesi Mugadziri, Kutengesa Kambani
Kwete yeMakambani Ekugadzira 3
Yegore Rinobuda Kukosha US $ 5 Mamirioni - US $ 10 Mamirioni
R & D Kugona Iko kune / vari Pasi pevashanu Vanhu R&D Injiniya (s) mukambani.
Chikwata chedu chine vashandi vane ruzivo mumusika uyu, mune yakafanana mutsara webhizinesi kwemakore gumi apfuura. Chikwata chedu chevatengesi vanhu vane ruzivo rwekutanga rwemusika uye inochengetedza hukama hwakanakisisa nevatengi.
Tiri pachinangwa chekubatsira muparidzi kufambisira mberi mabhizinesi avo uye kuwana mukana wekukwikwidzana needu zvigadzirwa zvigadzirwa.
Isu tiri Sporting goods Company.Tiri WIN.MAX.
WINMAX mucherechedzo wechiratidzo pakupa Rizere Range reHigh Quality Leisure Sporting Goods kune nyika.